Apple Mamorona programa fanoloana Touchpad ho an'ny iPhone 11 | Vaovao IPhone
Ao Cupertino Sarotra ho azy ireo ny hahafantatra rehefa tsy manao zavatra tsara izy ireo ary indraindray maharitra ela kokoa noho izay heverintsika ho mahazatra ny famoronana programa fanamboarana maimaimpoana. Ny ohatra iray amin'izany dia hita ao amin'ny olan'ny fitendry amin'ny MacBook miaraka amin'ny mekanisma lolo, programa fanoloana izay naharitra efa ho 3 taona vao noforonina.
Na izany aza, amin'ny fotoana hafa, misy programa fanoloana nesorina tsy ho aiza intsony, fanoloana hamahana olana izay dia hita amin'ny fitaovana vitsivitsy, toy ny tranga amin'ilay lazainay anao eto ambany.
Apple dia namorona programa fanoloana vaovao ho an'ny mpampiasa iPhone 11 (ho an'ity modely ity ihany) izay afaka eOlana xExperience izay ajanon'ny efijery ny valiny.
Ity programa fanoloana ity Izy io dia natokana ho an'ny iPhone 11, Ka raha manana an'ity olana ity ianao ary iPhone 11 Pro na iPhone 11 Pro Max no misy anao dia tsy maintsy miandry programa vaovao ianao na mandeha mivantana any amin'ny Apple Store hamboarina.
Apple dia nanapa-kevitra fa ny isan-jato kely amin'ny efijery iPhone 11 dia afaka ajanony ny valiny hikasika anao noho ny olana amin'ny modely fampisehoana. Ny terminal izay mety voakasik'ity olana ity dia novokarina teo anelanelan'ny Novambra 2019 sy Mey 2020.
Amin'ny alalan'ny ity pejy ity, azonao atao ny manatona raha ny iPhone-nao no isan'ireo mety voakasik'izany mampiditra ny laharana nomerao anao. Raha eny dia amin'ny alàlan'ny tranokala no ahafahanao mifandray amin'ny Apple Store na mahita mpanome tolotra alalana hisolo an'ity modely ity maimaimpoana.
Ity programa ity dia azo alaina ho an'ny maodely iPhone 11 voakasik'izany mandritra roa taona taorian'ny nividianana azy. Raha mampiseho fahasimbana ara-batana ny terminal dia mety mandà tsy hanamboatra azy io i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 11 » Apple dia mamorona programa fanoloana touchpad ho an'ny iPhone 11
Halil abel dia hoy izy:
Heveriko fa mety tsara raha nametraka ny rohy mankany amin'ny pejy Apple
Valiny tamin'i Halil Abel
Ny rohy dia ao amin'ny lahatsoratra, ao amin'ny fehintsoratra penultimate.